Marwada Qaranka oo deeq raashin ah gaarsiisay dad danyar ah oo ku nool Muqdisho | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Marwada Qaranka oo deeq raashin ah gaarsiisay dad danyar ah oo ku...
Marwada Qaranka oo deeq raashin ah gaarsiisay dad danyar ah oo ku nool Muqdisho
SNTV:-Marwada Koowaad ee Qaranka, Marwo Seynab Macalin Cabdi ayaa deeq raashin ah oo isugu jirta Bur, Bariis, Sokor, Timir, Saliid, Digir iyo Baasto waxa ay gaarsiisay qoysas danyar ah iyo caruur agoon ah oo ku nool Muqdisho.
Qoysaska oo tiro ahaan gaaraya ilaa 400 oo qoys oo danyar ah ayaa si siman u helay deeqdan ka timid Marwada Qaranka, waxa ayna sheegeen qoysasku in ay deeqdan heleen xilli ay aad ugu baahneeyeen oo lagu jiro bishii barakeysneed ee Ramadaan.
Sidoo kale xarumaha Agoonta Muqdisho oo ay ka mid yihiin Xarunta Gabdhaha Agoonta ah ee Boondheere, Xarunta Agoonta Wiilasha Kaaraan, Xarunta Agoonta Muqdisho ee Degmada Cabdicasiis iyo Xarunta Agoonta Al-xaramayn ee degmada Xamarweyne oo gacanta ku haya ardey badan oo agoon ah ayaa ka faa’iideystay raashin qeybintan.
Hay’adda Kheyriga aah ee Saynab Macallim Foundation oo maalmihii ugu dambeeyay ku hawlaneyd qeybinta deeqdan cuntada ah ayaa maalintii shalay ahayd soo gebogabeysay.
Previous articleWafdi ka socda Laanta taageerada howlagaladda nabadda ee midowga Africa oo kulan la qaatay Saraakiisha AMISOM
Next articleWaaberi oo caawa u gudubtay wareegga labaad ee Tartan Cilmiyeedka Warbaahinta Qaranka